NY Supermarket – Thet Nandar
နယူးယောက် …. ဒီဆိုင်က ရွှေတွေ အများဆုံး ဈေးဝယ်တတ်တဲ့ဆိုင်ပါ။ အဲဒီမှာဆိုင်မှာ တညင်းသီး၊ ဒူးရင်းသီးတွေလည်း ရတတ်ပါတယ်။
ထိုင်းဆိုင်မှာ ထမင်းစားပီး သူ့ဘေးနားက NY supermarket မှာ ဈေးဝယ်ကြတယ်။
ဆီချက်ခေါက်ဆွဲတို့၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ လုပ်စားဖို့ ခေါက်ဆွဲအမျိုးမျိုးတွေပါ။
ကြက်သားအမျိုးမျိုး နဲ့ ယုန်သားတွေ
ယုန်သားဈေးနှုံး၊ (ရွှေမှာတုန်းက ၀ါးတန်းလမ်းက တရုတ်စားသောက်ဆိုင်မှာ ယုန်သားဟင်း ရောင်းတယ်ဆိုတာတော့ ကြားဖူးတယ်။ ၉၈ လောက်ကလားပဲ။ အခုတော့ အဲဒီ စားသောက်ဆိုင် မရှိတော့ပါဘူး။)
ဘဲခြေထောက်အရေခွံ နဲ့ ၀က်နံရိုး၊ ကြိတ်ထားသော ၀က်သား (အသားအမျိုးမျိုး)
၀က် တကောင်လုံး အမျိုးအစားအစုံပဲ (၀က်ဦးနှောက်တော့ မတွေ့မိဘူး)
ပုစွန်တွေ ၂ပေါင်လောက်တော့ ၀ယ်လာခဲ့လိုက်တယ်။
ဒူးရင်းသီး တပေါင်ကို 99ပြား
ကြက်သွန်နီ က အသေးလည်း ရတယ်။ အကြီးလည်း ရတယ်။
ကုန်ခြောက်တန်း (ခေါင်းလျှော်ရည်ဗူးများ၊ lotion)
ဈေးဝယ်တွန်းလှည်းထဲ ထိုင်ပီး အရုပ်ဆော့နေသော သားသား
ဈေးရှေ့လမ်းမ (ဈေးဝယ်တွန်းလှည်းလေး – သတိရတယ်။ ကိုယ့်စင်ကာပူကနေ သဘောကျလို့ မြန်မာသယ်လာတာ။ အခု ဒီမှာလည်း အဲလို ဈေးဝယ်တွန်းလှည်းတွေနဲ့ သွားလာနေတာ တွေ့တယ်။ အခုနေတဲ့ စတိတ်ဘက်မှာတော့ အဲလို ဈေးဝယ်တွန်းလှည်းတွေနဲ့ သွားလာနေတာ မတွေ့ဘူး။ )
4 thoughts on “NY Supermarket”
ဆိုင်က အကြီးကြီးပဲနှော်။ ဝယ်ချင်စရာတွေ အများကြီးပဲ။
IT IS NOT NEW YORK CHINA TOWN. KIND OF ASIAN STORES WHERE LOCATE IN EMLHURST..? NEAR QUEENS BROADWAY AVE.
IT IS NOT CHINA TOWN